Fandikan-dalan’ny fiarakodia : Hangonina eny amin’ny boriborintany taratasy
Fepetra vaovao no noraisin’ny Polisim-pirenena momba ireo taratasin’ny fiarakodia notanan’ny Polisy raha tratra nanao fandikan-dalàna momba ny fifamoivoizana.
Hisy tapakila fakàna taratasy vaovao hatonta, ka izay raisina ny taratasiny, tsy maintsy omena io fanamarinana io. Isaky ny boriborintany, misy ny kaomisarian’ny Polisy kosa, no angonina ireny taratasy ireny. Polisy mitaingina môtô na hanao ny fanangonana sy hitondra azy ao amin’ny Hotelin’ny Polisy etsy Tsaralalàna.
Fisorohana ny kolikoly izany rah any fanampim-baovao azo.
Hisy fiofanana homena tsy tapaka ireo polisy efa amperinasa. Ny mpiza-draharaha kosa, dia tsy homena hitam-basy, raha toa ka tsy nahazo fiofanana telo volana sy efa hita fa mahafehy ny fampiasana basy.
Anisan’ny nampahafantarin’ny Tale jeneralin’ny Polisy teny Antanimora ireo fepetra ireo. Hisy tahaka izany ihany koa any amin’ny faritra.